ASA UPVC sheet uphahla incence W1025 - China Hubei Shengyu zokwakha
sheet uphahla incence Shengyu UPVC, wenziwe uPVC, ekugqibeleni ziyabuyiseleka kunye ASA resin. Kuhleli izinzile ngebala kunye neempawu zomzimba phantsi ultra-violet radiation, ngamathontsi, ubushushu, chillness kunye nempembelelo. Lisetyenziswa kwi workshop, yokugcina, izindlu kunye nophahla ezahlukeneyo esisigxina kunye nembali iminyaka emininzi isicelo kumazwe amaninzi ahambele phambili. sheet lophahla Shengyu UPVC yindlela entsha ukwakhiwa nophahla kunye nodonga khazi. Ngumsebenzi onzima, esiluqilima umbala ezilula, ngokuba yiGolgotha ​​ngcono ...
FOB Price: 2.99-7.75 / square metres
sheet uphahla incence Shengyu UPVC, wenziwe uPVC, ekugqibeleni ziyabuyiseleka kunye ASA resin. Kuhleli izinzile ngebala kunye neempawu zomzimba phantsi ultra-violet radiation, ngamathontsi, ubushushu, chillness kunye nempembelelo. Lisetyenziswa kwi workshop, yokugcina, izindlu kunye nophahla ezahlukeneyo esisigxina kunye nembali iminyaka emininzi isicelo kumazwe amaninzi ahambele phambili.
sheet lophahla Shengyu UPVC yindlela entsha ukwakhiwa nophahla kunye nodonga khazi. Ngumsebenzi onzima, esiluqilima umbala ezilula, ngaphezu intsimbi kunye iphepha kwalenza. Okubaluleke ngakumbi, uya kuze umhlwa kwi epakini kushishino enzima.
Ubukhulu ububanzi Cover Ububanzi Purlin Space ubude Weight umphezulu umbala
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1025mm 940mm 800mm njengoko kuyimfuneko 3.0-6.0KG / ㎡ ecwebezelayo White, Blue, Grey, ubumba, Red
Njengoko izinto umaleko phezulu, intlaka ASA zobunjineli linyuke ezifanele ukusetyenziswa yangaphandle. Nkqu baboniswa ultra-violet radiation, ngamathontsi, ubushushu, chillness kunye nefuthe, iimveliso ukuhlala uzinzo imibala kunye neempawu zomzimba. Iimvavanyo ebibanjelwe Ukwaluphala Centre Yovavanyo Arizona kunye Florida lwenu ngaphantsi kwe △ E-5 kwisithuba seminyaka eli-10.
Sheet kophahla iplastiki Shengyu udlula 6,000h uvavanyo ukuguga yi China National Test Centre for Chemical zokwakha kunye japan yayo △ E <4.
Shengyu UPVC sheet uphahla incence, yayo modulus ubushushu Uhanjiso yi 0,325 W / m. K, leyo Ndikulinganise 1/3 naleyo 10mm sheets ngodongwe babulingana nesandla, 1/5 kunye naleyo 10mm sheets zesamente babulingana nesandla, 1/2000 kunye naleyo ubukhulu 5mm sheets umbala ngentsimbi.
Shengyu UPVC sheet kophahla incence, umaleko likumyinge (ASA intlaka) uye yokusebenza enkulu uvavanyo anti-umhlwa, nto leyo eya ukunqaba ngenxa yomhlaba olinywe imvula nekhephu. ASA resin iyamelana iikhemikhali ezininzi ezifana acid, obrak, ityuwa, njl Ngoko ke, kufanelekile ukuba isicelo ngaphandle kwindawo costal sina ngokudleka ityuwa inkungu ungcoliseko lomoya enzima.
Umphezulu oxwebhu uphahla exineneyo agudileyo, leyo isiphumo esifanayo amagqabi kwemitholo. Ayizi awunako ukufunxa uthuli kwaye lula icocwe mvula.
Akhona eXcellent yokusebenza anti-umthwalo
Shengyu UPVC sheet uphahla incence inomthamo olomeleleyo ukuthwala enzima. Olu vavanyo, olwenziwe Shanghai Municipal Building Material Component Umgangatho Supervision and Station Test, ingqina ukuba akukho sihlwahlwaz zikwimeko we 800mm ekuxhaseni kweminwe kunye nomthwalo 150kg isicelo.
Enye iqhekeza eqhelekileyo oxwebhu lophahla ubunzima 1.87-6.0kg square metre nganye.
With China Certificate of Environmental Ukuphawula, le mveliso kubonisa akukho radiation, izinto volatilizable kunye nongcoliseko. Yiyiphi eyona, iglasi inokuphinda irisayikilishwe ngokupheleleyo.
Previous: Zu daylighting sheet WW1025
Next: UPVC panel udonga T1110
1.UPVC (ASA) rooing kwiimakhishithi ezisebenzayo phezulu ephahleni ukusuka °-8 ukuya ku-22 °, kunye purlin ixesha hayi ngaphezulu kwe-800mm.
Sheet kophahla T980 esetyenziswa phezulu ephahleni ukusuka °-6 ukuya ku-22 °, kunye purlin ixesha hayi ngaphezulu kwe 1200mm.
izinto zokwambathisa ezikhoyo 2.Thermal ayikwazi nelokungasetyenziswa ngokuthe ngqo phantsi sheet.
Nceda sebenzisa ileli okanye ezinye izibonelelo ezifunekayo ngexesha lofako.
Nceda musa ukuma phakathi purlins ezimbini ngexesha lofako.
Kuba kophahla ezinophahla, iimakhishithi kwicala ngalinye kufuneka zifakwe ngexesha elinye kunye tile ephakeme.
Ufakelo ayikhuthazwa tu into yokuba kwenziwa ikwiqondo lobushushu ngezantsi -5 ℃.
Faka yi roofers yobungcali ukuqinisekisa umgangatho yofakelo.
ukweqa Tye yi lwamaza omnye zinonxibelelwano nkqo kungekho ngaphantsi kwe-100mm.
Le uphahla Iimakhishithi nodonga khazi ingalungiswa yi amagwegwe anikwa okanye izikrufu self-ngokuthinta.
Kuba sheet zonke, iiseti ezimbini amahaki kufuneka ilungiswe kakuhle kwi purlin mnye, acandacanda Crest otshangatshangiswayo.
Wonke wave Crest, kwi indawo nkqo sifana kufuneka zigxunyekwe purlin ngu neefolokhwe, yaye indlela nokuqinisa kufuneka zithathwe kwiindawo ngumoya enzima.
Kuba claddings udonga, i seqela phakathi purlins ezimbini kufuneka kungalungiswa rivet ezimbini.
Imiqamelo irabha kufuneka zisetyenziswe phantsi sheet ukuba ukulungisa yi neefolokhwe, iimbumbulu Screw kufuneka zaqina kakuhle, hayi ngaphezu-tight.
6.Roofing sheets kufuneka zisikwe yi wabona engenamazinyo.
Ukusebenzisa ngokumba zombane ukubaqhelisa imingxunya.
Nceda qinisekisa ukuba amaphepha asele ngokuchanekileyo purlins phambi imingxuma wokugrumba.
Ubukhulu bepali hole kufuneka ibe banzi 2mm kunalowo hook mandrel.
Nceda sebenzisa PVC iglu ukuba kutywinwe imingxunya mis-kugrunjwa.
8.Storage kunye Ukuphatha
Iimakhishithi kufuneka zigcinwe zibekwe phezu moya isitali, leyo kufuneka ibe ngaphezu sheet.
Sheets ngesikhawu ukuba sibekwe kwi sheets elide ukunqanda deformation.
Musa beka iinkangeleko ezahlukileyo amaphepha kunye.
Nceda ukugcina amaxwebhu emthunzini.
Kuphephe ligqobha indlu, bezihlikihla okanye ngokuqhwaya kumphandle ngexesha yokuphatha.
3 Ulwaleko Upvc Rom of Tiles
Clear rhanga-Plastic zophahla Sheets
Composite Asa Camera Upvc Roof Sheet
Corruagted zophahla Sheet
Yenyuka Fibreglass zophahla
Sheets rhanga-Plastic Clear
Yenyuka Plastic zophahla
Plastic zophahla Sheets incence Kuba lamaqondo
rhanga-PVC Material zophahla Sheet
Incence PVC Roof Sheet
Uphahla Sheet incence
zophahla Sheets rhanga-
Sheets zophahla incence Ubungakanani
Incence zophahla Sheets Upvc
Umthambo rhanga-zophahla Sheets
Heavy Duty rhanga-Plastic zophahla Sheets
Namandla High Upvc Roof Sheet
Zokuvala Upvc Roof Sheet
Kerala Clear rhanga-Plastic Roof Sheets
Ezinkulu Sheets zeplastiki rhanga-
Span Umbala Long Camera rhanga-zophahla Sheet
Zomaleko Multi Upvc zophahla Tile
Zeplastiki rhanga-Sheet Price
PVC Ke Upvc Wave zophahla tile lwamakhasi ayingxangxasi
PVC rhanga-Plastic Sheets
PVC rhanga-zophahla sheets
Amanqaku okrwada Kuba rhanga-zophahla Sheet
Synthetic intlaka Upvc Plastic zophahla Sheet
Trapezoidal Upvc zophahla Sheet
Upvc Plastic zophahla Sheet
Upvc Roof Sheetcorrugated zophahla Sheet
Upvc zophahla Sheet
Used incence Roof Sheet
White rhanga-zophahla Sheet